Tips to Relieve Menstrual Pain – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Tips to Relieve Menstrual Pain
” ရာသီလာစဉျနာကငျြခွငျးမြား သကျသာစဖေို့ “
လစဉျခံစားရတဲ့ ရာသီလာနတေုနျးမှာ ဆီးစပျကိုကျတာ၊ခါးကိုကျတာ တှကွေောငျ့ ရာသီလာရကျတှရေောကျမှာကွောကျနပွေီလား ???
ဒီလိုနာကငျြကိုကျခဲတာတှေ သိသိသာသာသကျသာစဖေို့ ရာသီလာခါနီးရကျအနညျးငယျအလိုနဲ့ ရာသီလာနစေဉျအခြိနျအတှငျးမှာ ဘယျလိုနထေိုငျစားသောကျသငျ့တာဆိုတာလေးတှေ ပွောပွအကွံပေးသှားမှာမို့…………..ဒီဆောငျးပါးလေး ဆုံးအောငျဖတျပွီးရငျတော့ ရာသီလာမယျ့ရကျတှကေို ကွောကျဖို့မလိုတော့ပါဘူးနျော။
(1)အရညျမြားမြားသောကျပါ။ တဈနကေို့ရေ ၆ – ၈ ဖနျခှကျခနျ့သောကျပေးပါ။ ဂငျြးပွုတျရညျ၊ကွကျပွုတျရညျ၊သံပုရာရညျအပါအဝငျလတျဆတျတဲ့သဈသီးဖြျောရညျအမြိုးမြိုး စတာတှလေညျး သောကျနိုငျပါတယျနျော။
(2) ရာသီလာနစေဉျကိုကျခဲမှုသကျသာစဖေို့ ရာသီရကျအတှငျး စားသငျ့တဲ့အစားအစာလေးတှနေဲ့ ရှောငျသငျ့တဲ့အစားအစာလေးတှေ ခှဲပွောပေးမယျနျော…..
ပွငျပအသငျ့စား အစားအစာတှေ (ပေါငျမုနျ့၊ကှတျကီး၊အာလူးခြောငျးကွျော၊ခရကျကာ၊ဒိုးနပျ၊ပီဇာ အစရှိတာတှေ…)
(3)အရညျမြားမြားသောကျသငျ့တယျလို့ အပျေါမှာပွောထားပမေယျ့မသောကျသငျ့တဲ့ အရညျတှလေညျးရှိတယျနျော….အဲ့ဒါတှကေတော့…
(4) အပူဓာတျဟာ ခန်ဓာကိုယျကွှကျသားတှကေိုပွလြေော့ပွီး နာကငျြခွငျးကိုသကျသာစတောမို့ ကိုကျခဲနခြေိနျမှာ ရနှေေးအိတျကပျခွငျး၊ရနှေေးပုလငျးကပျခွငျးတို့ကလညျး နာကငျြမှုဝဒေနာကို သိသိသာသာလြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ ရာသီလာနစေဉျ ရခြေိုးတဲ့အခါမှာလညျး ရနှေေးလေးနဲ့ခြိုးပေးရငျ အကောငျးဆုံးပဲပေါ့။
(5) ‘သူလာရငျ နာတော့မှာပဲ’ ဆိုပွီး တှေးကွောကျပွီး အိပျရာထဲပဲ ခှမေနနေဲ့ဦး။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျး၊လမျးလြှောကျခွငျး၊ပွေးခွငျး၊ရကေူးခွငျး…..စတဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားအားကစားအမြိုးမြိုးဟာလညျး ဓမ်မတာကွောငျ့ကိုကျခဲခငျးတှကေို သိသာစှာလြော့ပါးစလေို့ ရာသီခြိနျတှငျးမှာ လှုပျလှုပျရှားရှားအားကစားလုပျပေးပါ။နဂိုကတညျးက အားကစားလုပျနတေဲ့သူတှအေနနေဲ့လညျး ရာသီလာနခြေိနျမှာ ဆကျလုပျလို့ရပါတယျ၊ ရာသီလာနလေို့ရပျထားဖို့မလိုပါဘူး။
(6)ယောဂကငျြ့ခွငျးကလညျး ရာသီခြိနျတှကေို နာကငျြမှုကငျးမဲ့စှာဖွတျသနျးနိုငျဖို့ သိသိသာသာအထောကျအကူပွုပါသတဲ့။
(7) အိပျရေးဝဝအိပျပါ။ အိပျခါနီးဖုနျးသုံးတာ၊ အငျတာနကျသုံးတာ၊TV ကွညျ့တာ၊ ကှနျပြူတာအသုံးပွုတာတှမေလုပျဘဲ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝအနားယူလိုကျပါ။ သကျတောငျ့သကျသာအရှိဆုံးအနအေထားနဲ့ အိပျရေးဝအောငျအိပျစကျခွငျးဟာလညျး ဓမ်မတာလာခြိနျကို အကောငျးဆုံးဖွတျကြျောနိုငျဖို့အထာကျအကူပွုမယျ့ နညျးလမျးတဈခုပါပဲ။
(8) ဆရာဝနျဆေးစာမလိုဘဲဝယျလို့ရတဲ့ ပါရာစီတမော၊ Ibuprofen စတဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတဈမြိုးမြိုးဝယျသောကျကွညျ့ပါ။
(ဒီနရောမှာပွောလိုတာ အထကျဖျောပွပါဆေးတှကေ ဆရာဝနျဆေးစာမလိုဘဲဝယျသောကျလို့ရတယျဆိုပမေယျ့…..မိမိမှာ အစာအိမျရောဂါအပါအဝငျ အခွားရောဂါတဈခုခုရှိနတော၊ အခွားသောကျနတေဲ့ဆေးရှိနတော၊ အရငျက ဆေး(သို့)အစားအစာတဈခုခုနဲ့ဓာတျမတညျ့တာမြိုးဖွဈဖူးတာ၊ဆေးအညှနျးကိုနားမလညျတာ၊ဘယျလိုသောကျရမလဲ….စတဲ့ စတဲ့အခွအေနတှေရှေိနမေယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီးမှ သောကျသငျ့ပါတယျရှငျ)
အထကျပါ နညျးလမျးတှဟော ရာသီလာစဉျကိုကျခွဲခငျးမြားကို ထိရောကျစှာသကျသာလြော့ပါးစတောမို့….လိုကျနာကငျြ့သုံးကွညျ့ကွဖို့တိုကျတှနျးပါရစေ။
ရာသီလာစဉျနာကငျြကိုကျခဲခွငျးဝဒေနာဟာ အမြိုးသမီးအမြားစုကွားမှာဖွဈလရှေိ့တယျမှနျပမေယျ့ …. သားအိမျတှငျးအလုံးတညျခွငျး အပါအဝငျ အခြို့သော အမြိုးသမီးမီးယပျရောဂါတှဟာလညျး ရာသီလာခြိနျမှာ နာကငျြကိုကျခွဲခငျးဝဒေနာကို သိသိသာသာခံစားရစတေတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ညီမလေးတို့၊မမတို့အနနေဲ့ နာကငျြခွငျးအရမျးဆိုးမယျ၊ အထကျပါနညျးလမျးတှလေိုကျလုပျကွညျ့လညျးမသကျသာဘူးဆိုရငျ ဆရာဝနျထံ သှားရောကျပွသဖို့ ဝနျမလေးဖို့နဲ့အခြိနျမဆှဲဖို့ အကွံပေးလိုကျပါရစရှေငျ….
ဒေါကျတာဝငျး (UM 2)
” ရာသီလာစဉ်နာကျင်ခြင်းများ သက်သာစေဖို့ “
လစဉ်ခံစားရတဲ့ ရာသီလာနေတုန်းမှာ ဆီးစပ်ကိုက်တာ၊ခါးကိုက်တာ တွေကြောင့် ရာသီလာရက်တွေရောက်မှာကြောက်နေပြီလား ???
ဒီလိုနာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေ သိသိသာသာသက်သာစေဖို့ ရာသီလာခါနီးရက်အနည်းငယ်အလိုနဲ့ ရာသီလာနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်သင့်တာဆိုတာလေးတွေ ပြောပြအကြံပေးသွားမှာမို့…………..ဒီဆောင်းပါးလေး ဆုံးအောင်ဖတ်ပြီးရင်တော့ ရာသီလာမယ့်ရက်တွေကို ကြောက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးနော်။
(1)အရည်များများသောက်ပါ။ တစ်နေ့ကိုရေ ၆ – ၈ ဖန်ခွက်ခန့်သောက်ပေးပါ။ ဂျင်းပြုတ်ရည်၊ကြက်ပြုတ်ရည်၊သံပုရာရည်အပါအဝင်လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးဖျော်ရည်အမျိုးမျိုး စတာတွေလည်း သောက်နိုင်ပါတယ်နော်။
(2) ရာသီလာနေစဉ်ကိုက်ခဲမှုသက်သာစေဖို့ ရာသီရက်အတွင်း စားသင့်တဲ့အစားအစာလေးတွေနဲ့ ရှောင်သင့်တဲ့အစားအစာလေးတွေ ခွဲပြောပေးမယ်နော်…..
ပြင်ပအသင့်စား အစားအစာတွေ (ပေါင်မုန့်၊ကွတ်ကီး၊အာလူးချောင်းကြော်၊ခရက်ကာ၊ဒိုးနပ်၊ပီဇာ အစရှိတာတွေ…)
(3)အရည်များများသောက်သင့်တယ်လို့ အပေါ်မှာပြောထားပေမယ့်မသောက်သင့်တဲ့ အရည်တွေလည်းရှိတယ်နော်….အဲ့ဒါတွေကတော့…
(4) အပူဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကိုပြေလျော့ပြီး နာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေတာမို့ ကိုက်ခဲနေချိန်မှာ ရေနွေးအိတ်ကပ်ခြင်း၊ရေနွေးပုလင်းကပ်ခြင်းတို့ကလည်း နာကျင်မှုဝေဒနာကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ရာသီလာနေစဉ် ရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်း ရေနွေးလေးနဲ့ချိုးပေးရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
(5) ‘သူလာရင် နာတော့မှာပဲ’ ဆိုပြီး တွေးကြောက်ပြီး အိပ်ရာထဲပဲ ခွေမနေနဲ့ဦး။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ပြေးခြင်း၊ရေကူးခြင်း…..စတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားအမျိုးမျိုးဟာလည်း ဓမ္မတာကြောင့်ကိုက်ခဲခင်းတွေကို သိသာစွာလျော့ပါးစေလို့ ရာသီချိန်တွင်းမှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအားကစားလုပ်ပေးပါ။နဂိုကတည်းက အားကစားလုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ရာသီလာနေချိန်မှာ ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်၊ ရာသီလာနေလို့ရပ်ထားဖို့မလိုပါဘူး။
(6)ယောဂကျင့်ခြင်းကလည်း ရာသီချိန်တွေကို နာကျင်မှုကင်းမဲ့စွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ သိသိသာသာအထောက်အကူပြုပါသတဲ့။
(7) အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။ အိပ်ခါနီးဖုန်းသုံးတာ၊ အင်တာနက်သုံးတာ၊TV ကြည့်တာ၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတာတွေမလုပ်ဘဲ ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူလိုက်ပါ။ သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးအနေအထားနဲ့ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်စက်ခြင်းဟာလည်း ဓမ္မတာလာချိန်ကို အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့အထာက်အကူပြုမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
(8) ဆရာဝန်ဆေးစာမလိုဘဲဝယ်လို့ရတဲ့ ပါရာစီတမော၊ Ibuprofen စတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဝယ်သောက်ကြည့်ပါ။
(ဒီနေရာမှာပြောလိုတာ အထက်ဖော်ပြပါဆေးတွေက ဆရာဝန်ဆေးစာမလိုဘဲဝယ်သောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့်…..မိမိမှာ အစာအိမ်ရောဂါအပါအဝင် အခြားရောဂါတစ်ခုခုရှိနေတာ၊ အခြားသောက်နေတဲ့ဆေးရှိနေတာ၊ အရင်က ဆေး(သို့)အစားအစာတစ်ခုခုနဲ့ဓာတ်မတည့်တာမျိုးဖြစ်ဖူးတာ၊ဆေးအညွှန်းကိုနားမလည်တာ၊ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ….စတဲ့ စတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်သင့်ပါတယ်ရှင်)
အထက်ပါ နည်းလမ်းတွေဟာ ရာသီလာစဉ်ကိုက်ခြဲခင်းများကို ထိရောက်စွာသက်သာလျော့ပါးစေတာမို့….လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
ရာသီလာစဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာဟာ အမျိုးသမီးအများစုကြားမှာဖြစ်လေ့ရှိတယ်မှန်ပေမယ့် …. သားအိမ်တွင်းအလုံးတည်ခြင်း အပါအဝင် အချို့သော အမျိုးသမီးမီးယပ်ရောဂါတွဟာလည်း ရာသီလာချိန်မှာ နာကျင်ကိုက်ခြဲခင်းဝေဒနာကို သိသိသာသာခံစားရစေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ညီမလေးတို့၊မမတို့အနေနဲ့ နာကျင်ခြင်းအရမ်းဆိုးမယ်၊ အထက်ပါနည်းလမ်းတွေလိုက်လုပ်ကြည့်လည်းမသက်သာဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ပြသဖို့ ဝန်မလေးဖို့နဲ့အချိန်မဆွဲဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေရှင်….
ဒေါက်တာဝင်း (UM 2)